Ahoana no fananganana sy fitomboan'ny lisitry ny mailaka | Martech Zone
Brian Downard avy ao amin'ny Eliv8 dia nanao asa mahafinaritra hafa amin'ity infographic ity sy ny lisitry ny lisitry ny marketing amin'ny Internet (Download) izay anisany an'io lisitra fanamarinana io amin'ny fampitomboana ny lisitry ny mailakao.
Niasa tamin'ny lisitry ny mailaka izahay ary hampiditra ny sasany amin'ireto fomba ireto:
Mamorona pejy fitobiana - Mino izahay fa ny pejy rehetra dia pejy fidirana… noho izany ny fanontaniana dia manana metodolojika opt-in ve ianao amin'ny pejy rehetra amin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny birao na finday?
Mampiasà tolotra atolotra opt-in - Alao antoka fa tolotra sarobidy sy mifandraika izany. Ny fanomezana iPad dia mety hahazo olona an-taonina hisafidy sy hampitombo ny tatitra SPAM anao rehefa mahazo mailaka tsy misy ifandraisany izy ireo.
Manampia endrika fidirana ho ao amin'ny tranokalanao - Nanangana endrika opt-in izahay ho anisan'ny CircuPress satria fantatray ny fitsikeran'izy ireo. Manitatra ny fiasan'izy ireo izahay izao!
Fifamoivoizana mivantana miaraka amin'ny antso-to-hetsika - Lazao amin'ny olona izay hatao manaraka, asehoy azy ireo ny antony ilana anaovany azy, ary ny toerana hanaovana azy.
Ampiasao ny porofo ara-tsosialy ao amin'ny kopiao - Ny isa sy ny fanamarihana dia manangana fifampitokisana ary fitokisana no mahatonga ny fiovam-po.
Angony mailaka ao amin'ny fivarotanao - Ny fivarotana, ny hetsika, ny trano fisakafoanana, ny fisotroana kafe… na aiza na aiza ahafahanao manangona mailaka amin'ny alàlan'ilay fahazoan-dàlan'ilay olona dia ataovy izany!
Mampiasà Video Manazava - Raha toa ka sarina teny arivo ny sary iray dia an-tapitrisany ny horonantsary manazava.
Ampiasao ny fanavaozana ny atiny - Ny fanesoana atiny fanampiny dia fomba iray tsara ahafahan'ny olona efa tafiditra ao anaty safidy!
Kitiho ny herin'ny tamberina - Raiso ny fanehoan-kevitra ary sonia ireo olona ireo!
Mamorona horonan-tsary misy valiny ao Wistia - Wistia dia manana fitaovana tsy mampino hanovana horonantsary sy fitarihana taranaka - ampiasao!
Alao sary an-tsaina ny fifamoivoizan'ny tranokalanao - Ahoana no ataon'ny olona amin'ny fitetezana ny tranokalanao ary angatahinao izy ireo hisafidy an'izany?
Mampiasà kopia mahasoa, miovaova ho an'ny asa - Atsaharo miaraka amin'ireo fiasa efa, asehoy ny soa ny olona!
Ataovy azo alefa ny hafatra - Ho gaga ianao amin'ny hoe mbola firy ny olona mbola tia an'io kopian-dahatsoratra sarotra hotehirizina io any aoriana.
Angony ireo mailaka mpaneho hevitra - Efa mpifamofo izy ireo, tonga izao ny fotoana hampodiana azy ireo amin'ny mailaka.
Mampiasà endrika fisintomana mivoaka - Ity no fotoana farany farany azonao nakana ity mpitsidika vaovao ity ao amin'ny tranokalanao, ampiasao!
Mametraha fifaninanana - Tahaka ny tolotrao ihany, alao antoka fa mifandraika amin'ny mpihaino anao ny fifaninanana ary manome lanja.
Manafaingana ny tranonkalanao - Ny tranonkala haingana dia zaraina, misy laharana ary manova ny mpitsidika tsaratsara kokoa.
Fitsapana ny zava-drehetra A / B - Raha azonao atao avo roa heny ny tahan'ny safidinao, sa tsy izany? Ny fitsapana A / B dia hanome anao izany fotoana izany.
Fifamoivoizana mivantana amin'ny fampisehoana mivantana - Sl slideshoware dia fomba iray tsy mampino hizarana ny fahaizanao… avereno miverina amin'ny tranokalanao ireo olona ireo amin'ny alàlan'ny rohy mafana amin'ny fampisehoana nataonao.
Mampiasà karatra fitarihana Twitter - Manidina ary zara raha vakiana ny sioka… fa ny sary kosa dia mampita ny hafatra avy hatrany ary manome fotoana iray hisamborana ny mpamaky.
Valio ny fanontaniana momba an'i Quora - Omeo lanja dia ho tonga izy ireo!
Tags: ab fitsapanaAnalyticsmiantso amin'ny asaantso ho amin'ny hetsikamanangona mailakamailaka mpaneho hevitratolotra atinyfanavaozam-baovaodika mitovyDownloadfivoahanahoronantsary mpanazavaFeedbackmitombo ny lisitry ny mailakapejy pejyatiny opt-inendrika opt-inQuorafifamoivoizana amin'ny tranokalaslideshareporofo ara-tsosialykaratra firaka twittersary an-tsainahafainganam-pandehan'ny tranokalawistiakopia fanoratana
6 Septambra 2015 à 5:25
Hey Doug, misaotra indray tamin'ny fizarana ny mombamomba ahy! Tena nahafinaritra ahy ny namaky ny hevitrao momba ny paikady tsirairay.
6 Septambra 2015 à 8:24
Mamokatra infografika mahafinaritra foana ianareo ry Brian! Ary hanasokajy ny tenako ho toy ny kely aho snob infografika. 🙂 Ampahafantaro ahy isaky ny mamoaka iray ianao!